Fijoroana ara-toekarena: Nitombo indray ny fanondranana entana any Sina tamin'ny volana Aprily tao anatin'ny fanaraha-maso COVID-19
Vaovao momba ny fiaraha-monina manerantany
BEIJING, 7 Mey (Xinhua) - nivezivezy indray ny fanondranana entana any Shina tamin'ny volana aprily, ary manampy ny famantarana fa mihazona ny varotra ny firenena any anaty ny famokarana fanampiny COVID-19.
Niakatra 8.2 isan-jato isan-taona ny eksport an'ny firenena tamin'ny taona 1,1 trillion yuan (eo ho eo amin'ny 198,8 miliara dolara amerikana) tamin'ny volana aprily, raha ampitahaina amin'ny fihenan'ny 11,4 isan-jato tamin'ny telovolana voalohany, hoy ny General Administration of Customs (GAC) tamin'ny Alakamisy.
Nidina 10,2 isan-jato ny fanafarana ho an'ny 1.09 trillion yuan tamin'ny volana lasa, ka niafara tamin'ny taham-barotra 318.15 miliara yuan.
Ny varotra entana avy any ivelany dia nidina ho 0.7 isan-taona isan-taona tamin'ny volana Aprily ka hatramin'ny 2,5 trillion yuan, mihanahana ny fihenan'ny 6,4 isan-jaton'ny Q1.
Tao anatin'ny efatra volana voalohany, ny varotra entana avy any ivelany dia 9.07 trillion yuan, nidina 4,9 isan-taona isan-taona.
Ny famerenana indray ny fanondranana dia mampiseho ny tanjaky ny toe-karena any Shina ary ny fangatahana ivelany ivelany ho an'ny entana vita any Shina, hoy i Zhuang Rui, filoha lefitry ny Institute of International Economy ao amin'ny University of International Business and Economics.
Nivadika tamin'ny COVID-19 ny varotra vahiny eto amin'ny firenena satria nikatona ny orinasa ary nihena ny baiko avy any ivelany.
Ny fihoaran'ny fironana dia ny tsenan'ny Shina miaraka amin'ny ASEAN sy ny firenena miaraka amin'ny Belt sy Road dia mitombo hatrany.
Nandritra ny vanim-potoana Janoary-Aprily, nitazoman'ny mpiara-miasa varotra lehibe indrindra an'i Shina i ASEAN tamin'ny varotra 5.7 isan-taona isan-taona tamin'ny taona 1.35 trillion yuan, mitentina 14,9 isanjaton'ny volan'ny varotra any ivelany any Shina.
Ny varotra mitambatra miaraka amin'ireo firenena amina Belt and Road dia naka 0.9 isan-jato ho 2.76 trillion yuan, mitentina 30,4 isanjato amin'ny fitambarany, fitomboan'ny isa 1,7 isan-taona isan-taona.
Ny fanafarana sy fanondranana entana miaraka amin'ny Vondrona eoropeana, Etazonia sy Japon dia nihena nandritra ny vanim-potoana, hoy ny angon-drakitra GAC.
Ny orinasam-panjakana tsy miankina no mpandray anjara lehibe indrindra tamin'ny varotra vahiny any Shina tao anatin'ny efa-bolana voalohany, ka nitombo ny 0.5 isan-jaton'ny isam-paritra hatramin'ny 3.92 trillion yuan.
Namolavola tetika politika i Shina hanampiana ireo orinasam-barotra avy any ivelany hanohy ny famokarana eo am-pamenoana ny COVID-19.
Ny fampiroboroboana dia nampidirina mba hanapahana ny vidin'ny orinasa ary hanampy azy ireo amin'ny fampindramam-bola mora kokoa, raha toa kosa ny fizotran-draharaha amin'ny fombafomba dia narafitra bebe kokoa mba hamporisihana ny fanondranana entana sy ny fanafarana.
Ny serivisy fiarandalamby entana any China-Europe dia nanjary fantsom-pahalalana manan-danja iray mba hiantohana ny varotra ara-barotra satria ny rivotra, ny ranomasina ary ny fitaterana an-dalambe no voan'ny areti-mifindra.
Nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny aprily, dia nisy 2 920 ny fiara fitaterana entana tao Shina-Eropa nitondra fiara nitondra 262,000 TEU (20 metatra mitovy lanja), mitombo 24 isan-jato ary 27 isan-jato avy isan-taona teo aloha.
Ny fanamarihana fa ny valanaretina dia niteraka tsy fahatokisana ny varotra, Ni Yuefeng, filohan'ny GAC, dia nilaza fa hanitatra ny paikadiny ny firenena hanohitra ny fiantraikan'ny COVID-19 ary hampisondrotra ny fitomboan'ny fifanakalozana ara-barotra maharitra.
Loharano: Xinhua Net